संपादकीय: बिद्यालयको भवनको बिकल्प खोज्ने की ? « Phidim Today
संपादकीय: बिद्यालयको भवनको बिकल्प खोज्ने की ?
Published on: 15 August, 2019 7:31 am
स्थानिय सरकार समेत रहेको फाल्गुन्द गाउँपालिकाको आफ्नो भवन नभएर विद्यालयमा कार्यलय सञ्चालन हुदै आएको छ । बिद्यार्थी र शिक्षकहरु खचाखच भरिएका कोठामा अध्यापन गराइरहेका हुन्छन् । भवन नहुदा ‘विद्यालय र गापा दुवैलाई बाधा पुगेको छ । तर हामीसँग विकल्प नभएका कारण विद्यालयकै भवनमा बस्न बाध्य छौँ भनेर स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरुले बताउदै आइका छन । अब समस्या देखाउने भन्दा पनि बिकल्पहरु खोज्ने हो कि ? विद्यालयका भएमध्येका नयाँ र ठूलो भवनमा गाउँपालिका कार्यालय बसेसँगै पठनपाठनमा समेत प्रभावित हुने गरेको छ । विद्यालयको माथिल्लो तलाको चार कोठामा गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सबै काम सञ्चालनमा छन् । त्यसको तल माविका कक्षा ८, ९ र १० सञ्चालनमा छन् । विद्यार्थी बढी भएकाले एउटै कक्षालाई २ सेसन बनाएको छ ।
गाउँपालिकाले भवन बनाउनका लागि आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन त गरेको छ तर भवन कहाँ बनाउने भनेर विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको छ । एकपक्ष अहिले रहेको घुर्विसे पञ्चमीमा नै भवन बनाउनु पर्ने भन्दै आएका छन् भने अर्को पक्ष कोलबुङमा सार्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । यस्ता समस्या मा न अलझी भवन निर्माण मा सबे जुट्नुने फाल्गुनन्द गाउँपालीकाका नागरीकहरुको हित देखिन्छ । सरकार बस्ने ठाउँनै कमजोर भए पछि सेवा प्रबाह पनि कमजोर हुनसक्छ अत सेवा प्रवाहलाई चुरुस्त बनाउन पनि अर्को ठाउँ सर्ने कि नयाँ आफ्नै भवन निर्माण गर्ने यस तर्फ सोच्न जरुरी छ ।
भवन भत्केपछि कक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको शिक्षकहरु बताउदै आएका छन् । अब सबै मिलेर समस्याको समाधान खोज्ने कि ? अरु निकायको समस्याको समाधान गर्नु पर्ने निकायनै दुई वर्ष सम्म आफै समस्यामा अझ्नु त भएन नी ।